Baandiraa Habashaa fi Toophiyaa, Alaabaa Oromoo fi Garbummaa Oromoo - Oromia Shall be Free
bilisummaa June 27, 2013	Leave a comment
Tufaa Nadhabaasaa irraa |Waxabajjii 26, 2013
Yeroo duraaf, bifti baandiraa Habashaa fi akkaataan inni itti taa’uu qabu seeraan (constitutionally)mutaayee gaazexaa irratti labsamee akka bahu kan godhe Hayile Sillaasee ture. Seera Haaromsa isaa (Revised Constitution of 1955), isa bara 1955 sana keessatti seeraan ifa ta’ee jira. Innis “Nagaariti Gaaxzexaa” waggaa 15ffa (15th year), Lakk.2, (No 2), boqqonnaa (article) 124, Sadaasa (November) 4, 1955 maxxanfamee bahe keessatti argama.
Akka gaazexaa kana irrati baheetti, gararraan isaa Arenguwade, walakkaan Bicaa, gajjallaan Qeyyi,ta’ee, tarree galee akka taa’u godhame. Isa dura maqaan haa beekamu malee, seeran tumamee, gaazexaa irratti labsamee jiraachuu isaa hin agarre.
Bara 1985 innaa Dargiin of jijjirree “Hizbawii Democrasiawi Repuublik Ityopiyaa” (PeoplesDemocratic Republic of Ethiopia) ofiin jedhe sanas, haalluun baandirichaa hin jijjiirramne. Ol’aantummaa Habashaa qabateetuma taa’e. Maqaa asxaa, “Mo’a Anbessa Ze Negede Yuhuda” jedhu duwwaatu gara„ye Itiyophiyaa Anbesa“ jedhamutti jijjiire.
Wayyaaneen iddoo asxaa Dargii, urjii qara shan qabuu fi jidduu qara urjii kanaa ammoo qara biiftuu shan itti naqxee jirti. Wayyaaneen, ol-antummaa Habashaa, seenaa haalluu baandiraa kanaan irra deebitee mirkaneessiteetti. Asxaan kun, idoolojii Wayyaaneen ittiin deemaa jirtu wajjin waan deemu hin fakkaatu. Maaliif booda keessa akka filattee, “carqi newu” kan jechaa turte sana irra deebitee“qiddus new” jettee aasxaa kanas irratti dhodhoobdeef hin beeku .
Baandiraan Habashaa uummata Oromoo wajjin qunnamtii attamii qaqba? jedhamnee yoo gaafatamne, deebiin keenya maal ta’uu danda’a? Deebiin keenya uummata Oromoof, mallattoogabrummaa fi garbichaa ti (symbol of slavery and colonisation) yoo ta’u,uummata Habashaaf(Toophiyaanotaaf) ammoo mallatttoo Garboomfataa fi ager Maqinaat (colonisation) jechuu iraaa kan hafe deebii biraa qabaachuu hin dandeenyu. Itti dabalee, mallattoo seenaa nugusoota Habashaa, kan Taabota afurtamii afurii fi kan diktaatorooti jechuu ni dandeenya.
Uumama Toophiyaa ilaalchisees, maqaan Toophiyaa jedhamuu, Afaan Griikii ta’uu isaa fi ummatoota bifa guraacha qaban, warra Afrikaa keessatti argamaniif kan kenname ta’uu isaa ni haalu. Isaan “Bayibila” wajjin uumamee nuu kennamee jedhani itti sagadu. Dhugaan jiru garuu, otoo Biyya ajajaaHaamsaa Alaqaa Giyorgis itti dhjalate, boodaa kan Qiddus Giyorgis jedhame (kan isaan itti sagadan) dhaqanii gaafatanii, dhugaa jiru barachuu danda‘u ture. Rakkoon jiru ammoo, Habashoonni namoota dhugaa barbaadan otoo hin ta’iin, faallaa dhugaa dhaabachuu fi seenaa dabsuuf warra uumaman waan ta’aniif, iddoo dhugaan jiru hin dhaabatan, dhaqaniis hin dubbatan, hin gafatan.
Alaabaan kunis, mallattoo bilisummaa, kan uummata Oromoo garbummaa baandiraa Habashaa jalaa baasee, birmadummaa uummataa deebisee gonfachiisuuf xiyyeeffatee kan ka’e ta’uu isaa mirkaneessa. Har’a ilmaan Habashaa fi jaleewwan isaanii ija attamiin alaabaa kana ialaalaa jiru? Habashaan waan uummata Oromoof ta’u maraa “ hin ta’u” jechuu malee, ni ta’a jedhanii hin beekan. Jechuus hin danda’an. Alaabaa Oromoo beekuu dhiisuu isaanii dura iyyuu, “uummanni Oromoo”jedhamu hin jiru jedhanii jiru. Har’a illee taanaan Itiyophiyawwinnet yoo ta’e malee Oromummaan uummata Oromoof akka hin taane jaleewaan isaanii barsiisaa jiru.
Tags baandiraa habashaa
Previous Aljazeera English has done a great job for Oromo people. So did the panellists representing the issues. In my view, the team has performed excellent, given the complexities and width of the issues and problems at hand
Next Fighter aircraft crashed in the U.S.